Kismaayo: JUNSA oo ku baaqday in la dhigo dibax baxyo looga soo horjeedo DFS - JNN24
Kismaayo: JUNSA oo ku baaqday in la dhigo dibax baxyo looga soo horjeedo DFS
Dalladda ururada aan dowliga ahayn ee Jubbaland ee JUNSA oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay xayiraadda la saaray duulimaadyada diyaaradaha magaalada Kismaayo iyo xariga Wasiirka amniga Jubbaland ee lagu xiray magaalada Muqdisho.
Dalladda JUNSA ayaa sheegtay arintani saamaysay isku socodka dadka shacabka ah iyo adeegyada bulshada sida Caafimaadka iyo Waxbarashada,waxayna Dowladda Federaalka ah ugu baaqeen in ay ka waantowdo arrimaha lagu dhibaateynayo shacabka Jubbaland.
Waxaa warbaahinta la hadlay Agaasimaha fulinta ee Dallada JUNSA Cabdullahi Sheekh Caafici waxa uuna sheegay in xayiraadda Jubbaland la saaray ay si gaar ah u saameysay bulshada balse aysan wax dhibaata ah aysan ku qabin madaxda Jubbaland.
Dhanka kale Daladda JUNSA ayaa shacabka Jubbaland ugu baaqday in ay labada maalin ee soo socota ay sameeyaan isku soo bax nabad galya ah kaas oo ay uga soo horjeedaan dhibaatada soo wajahday shacabka Jubbaland.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wali ku adkeysanaysa go,aankeeda mana jirto wax jawaab ah oo ku aadan cabashada shacabka Soomaaliyeed.
The post Kismaayo: JUNSA oo ku baaqday in la dhigo dibax baxyo looga soo horjeedo DFS appeared first on Jubbaland TV.
← Tiro ka mid ah nabad diidka Arxanka daran ee Al-Shabaab oo la dilay iyo hub laga furtay
Faaduma C/laahi Max’uud: Safiirka Soomaaliya ee Hindiya oo Shirweyne Caalami ah ka qayb gashay →